I-PPC Ithuthukisa Kanjani Ukumaketha Okungenayo | Martech Zone
I-PPC Ithuthukisa Kanjani Ukuthengisa Okungenayo
NgoLwesibili, Novemba 19, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 UJenn Lisak Golding
Enye yezingxoxo ezinkulu ezenzekayo namuhla ukuthi ungayabela kanjani imali yakho ngemizamo yakho yokumaketha engenayo. Abathengisi, ngokwesilinganiso, basebenzisa amaqhinga ahlukene angaphezu kwe-13 kumasu abo ukuheha umkhondo omusha (umthombo: I-Content Marketing Institute), kufaka phakathi i-infographics, ukubhuloga, imikhankaso ye-imeyili, amavidiyo, njll. Ngakho-ke, sithola kanjani ukuthi sizoyisebenzisa kuphi nokuthi sizosebenzisa malini?
Isu lokumaketha elingenayo libukeka lihlukile ebhizinisini ngalinye nasembonini ngayinye. Izabelomali ziyahlukahluka futhi. Kepha ingxenye ebalulekile yanoma yiliphi isu lokumaketha elingena ngaphakathi isebenzisa izinsizakusebenza ezitholakala ngokusemandleni ukukhiqiza imikhondo efanelekile. Isu elilodwa elibonisa imiphumela ngokukhokha ngokuchofoza ngakunye (PPC), futhi ngincoma ukufaka leli qhinga elikhokhelwayo ngokwengeziwe usuku ngalunye.
Kumaklayenti ami amaningi, kudingeka imikhankaso yokukhokha ngokuchofoza ngakunye futhi bayasebenza. Kungani? Ngoba sisebenza neyethu Abalingani be-PPC, i-EverEffect, namakhasimende ethu uku:
hone in inhlanganisela yamagama asemqoka (organic and paid) yemikhankaso ye-PPC
bachitha isikhathi ukuthola ukuthi bazinciphisa kanjani izindleko zabo ngokutholwa ngakunye (i-CPA)
wabe isabelomali semikhankaso ye-PPC inyanga ngayinye
Ngamanye amagama, i-PPC iyasebenza, kepha kuthatha isikhathi ukukhombisa imiphumela, njenganoma iyiphi enye indlela ephumelelayo yokuthengisa.
Ingxenye yale nqubo ukukhomba ukuthi yimaphi amagama asemqoka asebenzela izimbangi futhi abe nokuqonda okungcono kwendawo yokuncintisana. Sisebenze ne-Ispionage, enkulu search ithuluzi lokumaketha, ukudala i-infographic mayelana ukuthi imikhankaso ye-PPC ingalithuthukisa kanjani isu lakho lokukhangisa elingenayo. Endleleni, sithole izibalo ezinhle zokuthi kungani i-PPC isebenzela wonke umuntu kusuka ezitolo ze-Mom & Pop kuya ezinkampanini ezinkulu (nokuthi kungani i-Ispionage isiza leyo mikhankaso).
Tags: Isu lokukhangisa elingavamilemarketing isukhokha imikhankaso ngokuchofoza ngakunyeimikhankaso ye-ppcSesha Marketing
Isaphulelo Somphakathi: Klomelisa Amakhasimende Akho Lapho Abelana
Mar 9, 2014 ku-11: 24 PM
I-RDM yenza ukucwaningwa kwamahhala kwe-Adwords PPC, vele ubashayele ku-256-398-3835
Mar 20, 2014 ku-6: 16 PM
Ngikhulume nezinkampani eziningi ze-PPC, kepha into ebaluleke kakhulu ongayenza emkhankasweni wakho wokumaketha amakhasi okufika. Izinkampani eziningi zikuthengisela into eyodwa eyi-1 enjengokwakhiwa kwewebhu, noma nje i-Google Adwords, noma ama-popups, noma nje ukuphinda uhlehlise okuthile. Lokhu kuyindida ngokuphelele ngoba ngenkathi into e-1 ingenza umehluko emkhankasweni wokumaketha ozinzile, ayikho into eyodwa kuyinto yokwakha noma yokuqhekeka ekumaketheni okuku-inthanethi, udinga lonke iphakethe, bese ucija / ulungiselele ukusuka lapho. Imali engenayo yebhizinisi lami inyuke ngaphezu kuka-60% ezinyangeni ezimbili lapho ngithathe i-ejensi enhle eyenza okungaphezu nje kwe-PPC, kepha ngibuye namakhasi ami okufika, ukuphinda ngibheke emuva, izikhangiso ze-banner, njll. Empeleni, nginenombolo yocingo kaSimon lapha, ungakhuluma naye futhi. Mane umnikeze ucingo ku-325-446-1507.